Questions प्रश्नहरू तपाईंको खोजी ईन्जिन अनुकूलन परामर्शदातालाई सोध्नुहोस् Martech Zone
हामीले विकसित गरेको ग्राहक वार्षिक इन्फोग्राफिक रणनीति यो हप्ता हाम्रो कार्यालय मा थियो। धेरै व्यवसायहरू जस्तै उनीहरू पनि खराब एसईओ परामर्शदाता भएको रोलर कोस्टरमा गएका थिए र अब नयाँ एसईओ परामर्श फर्मलाई उनीहरूलाई नोक्सान फिक्स गर्न सहयोग पुर्‍याएका छन्।
र त्यहाँ क्षति भएको थियो। खराब एसईओ रणनीति को केन्द्रीय जोखिमपूर्ण साइट को अधिकता मा ब्याकलिl्क थियो। अब ग्राहकले लिंकहरू हटाउनका लागि ती साइटहरू मध्ये प्रत्येकलाई सम्पर्क गर्दैछ, वा गुगल सर्च कन्सोल मार्फत उनीहरूलाई अवहेलना गर्दै। व्यापार दृष्टिकोणबाट, यो अवस्था सबैभन्दा खराब हो। ग्राहकले दुबै सल्लाहकारहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्‍यो र यस बीचमा, क्रम निर्धारण र सम्बन्धित व्यवसाय हरायो। त्यो हराएको राजस्व उनीहरूका प्रतिस्पर्धीहरूमा गयो।
किन एसईओ उद्योग संघर्ष गर्दछ
गुगलको एल्गोरिदमले उपकरण, स्थान, र प्रयोगकर्ता व्यवहारको आधारमा परिणामहरू लक्षित गर्न र निजीकृत गर्ने तिनीहरूको क्षमताको साथ परिष्कारमा वृद्धि गर्न जारी राख्छ। दुर्भाग्यवश, धेरै एसईओ परामर्शदाता र फर्महरूले केहि वर्ष अघि प्रक्रियामा भारी लगानी गरेका छन् जुन अब प्रासंगिक छैनन्। तिनीहरूले स्टाफहरू निर्माण गरे, उपकरणहरूमा लगानी गरे, र रणनीतिहरूमा आफैंलाई शिक्षित गरे जुन पुरानो मात्र होईन तर ग्राहकहरूलाई जोखिममा पार्नेछ यदि आज प्रयोग गरियो भने।
SEO उद्योगमा हब्रिसको एक टन छ। मलाई विश्वास गर्न गाह्रो लाग्छ कि केहि परामर्शदाताहरू, वा मनपर्ने खोजी फोरम, वा सम्पूर्ण एजेन्सीसँग अरबौं डलर कमाउन सक्ने क्षमता छ जुन Google ले निरन्तर उनीहरूको एल्गोरिदमलाई सुधार गर्नमा लगानी गर्दछ।
आधुनिक SEO का लागि केवल तीन कुञ्जीहरू छन्
यस लेखले उद्योगमा केहि मानिसहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ हामी नेतृत्व गर्न कोशिस गर्छौं, तर मलाई मतलब छैन। म ग्राहकहरूलाई टुक्राहरू उठाउनुपर्दा र थोरै कार्यान्वयन गरिएको कार्बनिक रणनीतिलाई अनडू गर्न पैसा खर्च गर्नका लागि थकित छु। प्रत्येक शीर्ष निशान SEO रणनीतिमा त्यहाँ केवल तीन कुञ्जीहरू छन्:
खोज इञ्जिन सल्लाह बेवास्ता गर्न रोक्नुहोस् - प्रत्येक खोज इञ्जिनले हाम्रो लागि उनीहरूको प्रयोगका सर्तहरू उल्लting्घन गरिरहेको छैन र तिनीहरूको उत्तम अभ्यासहरूको अनुसरण गर्दैछ भन्ने कुराको अविश्वसनीय संसाधनहरू प्रदान गर्दछ। अवश्य पनि, कहिलेकाँही सल्लाह अस्पष्ट हुन्छ र यसले अक्सर खामाहरू छाड्दछ - तर यसको मतलब एसईओ परामर्शदाताले सीमाहरू धकेल्नु पर्दैन। हैन केही काम गर्दछ जुन उनीहरूको सल्लाहको काउन्टरको रूपमा छ कि अर्को हप्ता वेबसाइट राम्रोसँग गाड्न सक्छ किनकि एल्गोरिथ्मले पत्तालगाउँदछ र यसको प्रयोगलाई दंड दिन्छ।
खोजी ईन्जिनहरूका लागि अनुकूलन गर्न रोक्नुहोस् र खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुकूलन गर्न सुरू गर्नुहोस् - यदि तपाइँ कुनै रणनीति विकास गर्दै हुनुहुन्छ जसमा ग्राहक पहिलो दृष्टिकोण छैन, तपाइँ आफैले हानि गर्दै हुनुहुन्छ। खोज ईन्जिनहरूले अत्यधिक खोजी इन्जिन प्रयोगकर्ताहरूको लागि ठूलो अनुभव चाहान्छन्। यसको मतलब यो होइन कि त्यहाँ खोजका केही प्राविधिक पक्षहरू छैनन् जुन खोज ईन्जिनसँग कुराकानी गर्न मद्दत गर्दछ र उनीहरूबाट प्रतिक्रिया लिन सकिन्छ ... तर लक्ष्य सधैं प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्नु हो, खोजी इन्जिनसँग होइन।
उत्पादन गर्नुहोस्, प्रस्तुत गर्नुहोस्, र उल्लेखनीय सामग्री प्रचार गर्नुहोस् - गए सामग्री सामग्री को दिन को लागी फिड गुगलको अतृप्त भोक। प्रत्येक कम्पनी र्याम्प अप र अधिक कीवर्ड संयोजनमा संलग्न गर्न प्रयास गर्न बकवास सामग्री को असेंबली लाइन वेग। यी कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गरे र उनीहरूको जोखिममा उनीहरूको आगन्तुकहरूको व्यवहारलाई वेवास्ता गरे। यदि तपाईं र्या at्कि atमा जित्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले प्रत्येक शीर्षकमा सबै भन्दा राम्रो सामग्री उत्पादन गरेर जित्नुपर्नेछ, यसलाई राम्रोसँग अनुकूलित माध्यममा प्रस्तुत गर्दै, र यसलाई बढाउने श्रोताको पहुँच सुनिश्चित गर्न यसलाई बढावा दिनुहुन्छ - अन्ततः यसको रैंक बढ्दै जान्छ खोज ईन्जिनहरूमा।
कुन प्रश्नहरू तपाइँ तपाइँको एसईओ परामर्शदाता सोध्नु पर्छ?
यी सबै दिमागमा राखेर, तपाईले आफ्नो एसईओ परामर्शदातालाई सोध्ने प्रश्नहरू कम गर्न सक्षम हुनुपर्दछ कि उनीहरू योग्य छन् र तपाईंको कम्पनीको उत्तम चासोमा कार्यरत छन् भनेर निश्चित गर्न। तपाईको खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन परामर्शदाताले तपाईसँग एक राम्रो पूर्वाधार रहेको, तपाईको अधिग्रहण, पोषण, र संरक्षण रणनीति बुझ्ने, र तपाईको ओम्नी-च्यानल प्रयासहरुमा खोज ईन्जिनका लागि अनुकूलनको प्रभावकारिता बढाउन काम गर्ने काम गर्दछ।
के तिमि सबै प्रयास कागजात तपाईं मद्दत, गतिविधि, उपकरणहरू, र प्रयास को लक्ष्य सहित - विस्तार मा हाम्रो खोज प्रयास गर्न को लागी आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ? एसईओ परामर्शदाताहरु जसले एक राम्रो काम प्रेम गर्दछ को लागी हर प्रयास मा आफ्नो ग्राहकहरु लाई शिक्षा। तिनीहरू जान्दछन् कि उपकरणहरू कुञ्जी होइनन्, यो सर्च ईन्जिनहरूको ज्ञान हो जुन ग्राहकले भुक्तानी गरिरहेको हुन्छ। उपकरण खोज कन्सोल जस्ता महत्वपूर्ण छ - तर डेटा संगै रणनीति महत्वपूर्ण के महत्वपूर्ण छ। एक पारदर्शी एसईओ परामर्शदाता एक महान एसईओ परामर्शदाता हो, जहाँ तपाईं प्रयासको साथ पूर्ण रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ।
तपाइँ कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ जहाँ हाम्रो SEO प्रयासहरू लागू गर्नुपर्छ? यो एक प्रश्न हो कि एउटा प्रश्न उठाउनु पर्छ। तपाईंको एसईओ परामर्शदाता तपाईंको व्यवसाय, तपाईंको उद्योग, तपाईंको प्रतिस्पर्धा, र तपाईंको भिन्नता मा गहिरो चासो राख्नु पर्छ। एक SEO सल्लाहकार जसले केवल गए र खोजशब्दहरूको सूची उत्पादन गर्दछ तिनीहरूको रैंकिंगलाई मॉनिटर गर्दछ, र तपाईंले उनीहरूसँग सामग्री धकेल्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंको व्यवसायलाई नबुझीकन डरावना हो। हामी समग्र ओम्नी-च्यानल रणनीतिमा कसरी फिट छौं भनेर बुझ्ने प्रत्येक SEO संलग्नता शुरू गर्दछौं। हामी उनीहरूको व्यवसायको प्रत्येक पक्षलाई जान्न चाहन्छौं कि हामी एक अद्वितीय रणनीति बनाउँदैछौं जसले कम्पनीलाई चाहिने परिणामहरू दिन्छ, हामी के गर्दैनौं लाग्छ तिनीहरूलाई आवश्यक हुन सक्छ।
तपाईं वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको प्रयासको प्राविधिक पक्ष र तपाई हामीलाई टेक्नोलोजिकल रूपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईंको सामग्री खोज ईन्जिनमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक केही आधारभूत प्रयासहरू छन् - जसमा रोबोट्स.टी.टी.टी.टी.टी., साइटम्याप, साइट पदानुक्रम, पुनःनिर्देशन, एचटीएमएल निर्माण, त्वरित मोबाइल पृष्ठ, धनी स्निपेट्स, इत्यादि पनि छन्। पृष्ठ गति, क्यासिंग, र जस्ता विशाल कारकहरू पनि छन्। उपकरण उत्तरदायित्व जसले मद्दत गर्दछ - खोजी मात्र होईन तर अन्तर्क्रियाको साथ।
तिमी कसरी तपाईंको SEO को सफलता मापन गर्नुहोस् प्रयासहरू? यदि तपाइँको एसईओ परामर्शदाता भन्छ कि जैविक ट्राफिक र कीवर्ड रैंकिंग को उपाय मा कसरी गरीन्छ, तपाइँलाइ समस्या हुन सक्छ। तपाईको एसईओ परामर्शदाताले तपाइँको सफलता को मापन गर्नुपर्दछ कति जैविक ट्राफिक मार्फत तपाईले उत्पादन गर्नुहुन्छ। अवधि ब्यापारिक परिणाममा मापनयोग्य वृद्धि बिना महान रैंकिंग हुनु सबै शून्यको लागि हो। अवश्य पनि, यदि तपाईंको लक्ष्य श्रेणीकरण गरिएको थियो ... तपाईं आफैंमा पुनर्विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईंसँग छ? पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी? एक SEO सलाहकार तपाइँको समग्र इनबाउन्ड मार्केटिंग रणनीति को हरेक पक्ष नियन्त्रण गर्न सक्दैन। एक एसईओ परामर्शदाता सबै ठीक गर्न सक्दछ, र तपाइँ अझै पनि प्रतियोगीहरु भन्दा पछाडि जान सक्नुहुन्छ कि अधिक सम्पत्ति, ठूलो दर्शक, र उत्तम समग्र विपणन छ। जहाँसम्म, यदि तपाईं आफ्नो कार्बनिक खोज ट्राफिक र स्तरको एक महत्त्वपूर्ण खण्ड गुमाउनु भयो किनभने उनीहरूले तपाईंलाई भयानक रणनीतिमा धकेले भने, उनीहरू तिनीहरूको प्रयासको केही अंश फिर्ता गर्न इच्छुक हुनुपर्छ। र यदि ती तपाइँको कार्य द्वारा तपाइँलाई खोज इन्जिन द्वारा दण्डित हुन्छन्, तिनीहरू तपाइँको लगानी फिर्ता गर्न इच्छुक हुनुपर्दछ। तपाईलाई यो चाहिन्छ।
संक्षिप्तमा, तपाइँ कुनै पनि एसईओ परामर्शदाताको शpt्कास्पद हुनुपर्दछ जुन तपाइँको मुटुमा राम्रो रुचि छैन, समग्र विपणन योग्यता छैन, र उनीहरूको प्रयोगको बारेमा प्रयास पारदर्शी छैन। तपाइँको परामर्शदाता एक निरन्तर आधार मा तपाइँलाई शिक्षा हुनु पर्छ; उनीहरूले के गरिरहेका छन् वा तपाईंको जैविक परिणामहरू परिवर्तन हुँदा उनीहरूले गर्दा परिवर्तन हुँदैछन् भनेर तपाईंले सोचिरहनु हुँदैन।
हामीले एउटा ठूलो कम्पनीमा काम गरेका छौं जुन उनीहरूसँग काम गर्ने १० भन्दा कम एसईओ सल्लाहकारहरू थिएनन्। सगाईको अन्त्यसम्म, हामी दुई जना मात्र थियौं। हामी दुबै ग्राहकहरु संग सल्लाहकार को बहुमत विरुद्ध सल्लाह दिएका थिए खेल प्रणाली - र जब हथौडा खस्यो (र यो कडा खस्यो) - हामी त्यहाँ गडबडी सफा गर्न आएका थियौं।
तपाइँको एसईओ परामर्शदाता एक उद्योग साथीहरु बाट एक दोस्रो राय स्वागत गर्नु पर्छ। हामीले ठूला कम्पनीहरूको अडिट अनुसन्धान पनि गरेका छौं र उनीहरूका एसईओ परामर्शदाताहरूले ब्ल्याकहाट प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् कि हुँदैनन् भनेर अडिट गर्नका लागि। दुर्भाग्यवस, हरेक संलग्नता मा तिनीहरू थिए। यदि तपाईं शंकास्पद हुनुहुन्छ, संभावना तपाईं समस्यामा हुन सक्नुहुन्छ।
टैग: कालाहाट एसईओकालोहाट एसईओ रणनीतिजैविकखोज इन्जिनखोज इञ्जिन रणनीतिएसईओएसईओ को लागी परिश्रमएसईओ अनुसन्धान
Emmerey गुलाब (@EmmereyR)
हे डगलस! राम्रो सुझाव! मलाई विशेष रूपमा मनपर्दछ जब तपाईं "खोज इञ्जिनहरूका लागि अनुकूलन गर्न रोक्नुहोस् र खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुकूलन गर्न रोक्नुहोस्"। तपाईं केवल एसईओ आज कसरी काम गर्दछ भनेर परिभाषित गर्नमा नखुल्लाइयो। मँ सोचिरहेको थिएँ, के तपाईं साना व्यवसायहरूलाई एसईओ परामर्शदाता वा कम्पनी राख्ने सल्लाह दिनुहुन्छ?